प्रधानमन्त्रीलाई विश्वप्रकाशको प्रश्न–लगाम उपहार पठाउँ कि सम्हाल्नु हुन्छ आफ्ना मन्त्री?
काठमाडौं, असार २६ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आफ्ना मन्त्रीलाई सम्हाल्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन्।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले के कांग्रेस दिनभर वीपी, रातभर विप्लव भन्ने नीति लिएको हो? भन्ने टिप्पणी गरेपछि कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्ना मन्त्रीलाई सम्हाल्न आग्रह गरेका हुन्।
ट्वीट गर्दै शर्माले भनेका छन्,‘प्रधानमन्त्रीज्यू लगाम उपहार पठाउँ कि सम्हाल्नु हुन्छ आफ्ना मन्त्री? उनले संसदमा प्रधानमन्त्रीले नै असंसदीय शब्द बोल्ने गरेकाले कुनै पनि फोटोकपी मन्त्रीसँग संस्कारको अपेक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्।
अराजनीतिक बोलीको जवाफ दिँदै हिड्नु उचित नहुने भन्दै ट्वीटमा शर्माले लेखेका छन्,भनाइ छ हलेदो भनेर चिनिसकेपछि धेरै कोट्याउनु हुन्न।’
Published Date: Thursday, 11th July 18:15:13 PM